परमेश्‍वरका वचनहरूका खण्डहरू
के आखिरी दिनहरूमा परमेश्‍वरले मानिसजातिको बीचमा के-कस्ता महान् कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने तपाईंलाई थाहा छ? परमेश्‍वरलाई चिन्‍न र राज्यमा प्रवेश गर्नको लागि यो कुरा महत्वपूर्ण छ! पत्ता लगाउन यो साइटमा खोजी गर्नुहोस्।
मुक्तिदाता पहिले नै फर्किसक्‍नुभएको छ! हामी कसरी परमेश्‍वरका पाइलाहरूलाई खोज्न, उहाँ देखा पर्नुहुने घटनालाई स्वागत गर्न, र नयाँ युगमा...
परमेश्‍वरले कसरी सबै मानिसहरूका गन्तव्यमाथि हुकुम चलाउनुहुन्छ? यसले हामीलाई परमेश्‍वरको अख्तियार र सार्वभौमिकता बुझ्न कसरी मदत गर्न सक्छ?...
यस विशेष खण्डले प्रभु बादलमा फर्केर आउनुको साँचो अर्थको बारेमा तपाईंले जान्नुपर्ने सबै कुरा वर्णन गर्दछ, जसले तपाईंलाई थुमाका पाइलाहरूलाई...